ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် နေ့တိုင်းစားရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ? - Lifestyle Myanmar
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် နေ့တိုင်းစားရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ?
ရုပ်ရှင်ရုံသွားရင် ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်နဲ့ ကိုလာက မဝယ်မဖြစ်ဝယ်ကြတဲ့ သရေစာဖြစ်ပါတယ်နော်။ သို့သော် သင်ဟာ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် ပုံမှန်စားတဲ့သူ၊ ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်ရင်တောင် အထူးသဖြင့် သင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ဒီစားစရာအကြောင်း သင်မသိနိုင်သေးတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။။ ဒီနေ့မှာတော့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်နေ့တိုင်းစားရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
၁။ ဝမ်းချုပ်တာကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်က ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်းစားတဲ့ အမိုက်စား အစားအစာတစ်ခုသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပေါက်ပေါက်ကို ဆားနဲ့ ထောပတ် မမြုပ်ထားဘူးဆိုရင် သူက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ သရောစာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတာက အမျှင်ဓါတ်ပါဝင်တာပါ။ ဝမ်းချုပ်တာကို သက်သာစေဖို့အတွက် အမျှင်ဓါတ် ၃.၅ ဂရမ်လောက် စားသုံးလို့ရပါတယ်။ air-popped ပေါက်ပေါက်က ကယ်လိုရီ ၁၀၀ထက် နည်းပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံမှာ ဝယ်စားရတဲ့ ပေါက်ပေါက် (သို့) ထောပတ်ပါတဲ့ ပေါက်ပေါက်က အဆီများတာကြောင့် ဝမ်းချုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် air-popped ပေါက်ပေါက်အမျိုးအစားကိုသာ ရွေးချယ်ဝယ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ စိတ်ဖိစီးမှုနည်းနည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်
ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက် စားခြင်းက လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံသဏ္ဍန်ကို သက်ရောက်စေရုံသာမက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကိုလည်း အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးက ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာဖြစ်ပြီး သူ့မှာ glycemic အညွှန်းကိန်းနိမ့်ပါတယ်။ သူ့မှာ serotonin အဆင့်ကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး သင့်စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်က complex carb လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သကြား၊ ဆား ဒါမှမဟုတ် ဆီထည့်လိုက်တဲ့အခါ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်ကနေ သင်မျှော်လင့်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက လုံးဝမရှိတော့ပါဘူး။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်စားတဲ့နည်းက သင့်စိတ်ခံစားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပညာရှင်တွေက တတ်နိုင်သလောက် စိတ်ကျေနပ်မှုရစေဖို့အတွက် ပေါက်ပေါက်ကို တူနဲ့စားဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
၃။ ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေ ပိုများနိုင်ပါတယ်
ဒီအရသာရှိတဲ့ သရေစာကို စားခြင်းက အမျိုးသားတွေမှာ သွေးစီးဆင်းမှုကို ကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် သန္ဓေတည်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေက အကြံပြုထားါပတယ်။ သူ့မှာ Arginine လို့ခေါ်တဲ့ အာဟာရဓါတ်တစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
၄။ သင့်ရဲ့ PMS ပိုကောင်းမွန်လာနိုင်တယ်
တစ်ခါတခါ ဓမ္မတာလာခါနီးမှာ ဟိုနားက ကိုက်သလို၊ ဒီနားက စစ်ခနဲဖြစ်သလို ရာသီကြိုဝေဒနာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းကတော့ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်က ဒီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို ပျောက်စေမယ့် အရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသရေစာက ခံစားချက်ကောင်းစေတဲ့ ဟော်မုန်းဖြစ်သော ဆီရိုတိုနင်ကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်က သင့်အား တည်ငြိမ်တဲ့ စွမ်းအင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကြောင့် ခဏအကြာမှာ အရမ်းဆာလောင်မွတ်သိပ်တာမျိုး မခံစားရတော့ပါဘူး။